प्रदेश ३ ले तोक्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा, कसले कति पाउने ? - Chandragiri News
Home समाज प्रदेश ३ ले तोक्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा, कसले कति पाउने ?
प्रदेश ३ ले तोक्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा, कसले कति पाउने ?
२०७४, ३ चैत्र शनिबार १०:५५
प्रदेश ३ को सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोकेको छ । बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्वन्धी विधेयक पास गरेको हो । यसलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाका मेयरले ४६ हजार तलब पाउनेछन् । ३ हजार सञ्चार सुविधा थप हुनेछ । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तोकिएको छ, भने विदेश जाँदा दैनिक २०० डलर पाउनेछ । यात्रा विमा १० लाखको हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पनि महानगरका मेयरले सरह ४६ हजार तलब पाउनेछन् भने उपप्रमुखले ४० हजार २०० पाउनेछन् ।यसबाहेक मासिक सञ्चार सुविधाका साथै दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश जाँदा दैनिक भत्ता पनि पाउनेछन् ।
Previous articleगृहमन्त्रीको आदेशमा थानकोटमा समातिए भारतबाट आएका शंकास्पद १० ट्रक
Next articleभूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता लिन सास्ती